Aas qaran oo loo sameeyey Alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac. [Akhris …] – Radio Daljir
Aas qaran oo loo sameeyey Alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 06 – Alle ha u naxariistee, waxaa maanta aas qaran oo aad u baallaran loo sameeyey wasiirkii warfaafinta dawladda Puntland Warsame Cabdi Shirwac ?Seefta Bannaanka? oo koox dabley ahi shalay galinkii hore ku dhax toogteen gudaha magaalada Galkacyo.
Alle ha u naxariistee aaska wasiirkii warfaafinta ee dawladda Puntland, waxaa ka soo qayb galay M/weynaha dawladda Puntlaand Dr C/rixmaan Maxamed Maxamuud Faroole, Ku xigeenkiisa Cabdisamad Cali Shire, Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, xubno isugu jira labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda oo ay ka mid ahaayeen wasiirrada amniga, maaliyadda, caafimaadka, diinta iyo awqaafta, mas?uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Galkacyo iyo dadweyne aad u tiro badan.
Intii waftiga m/weynuhu ay ku soo jeedeen magaalada Galkacyo waxaa ka qallimmay mid ka mid ah gaadiidkii ciidanku ay saarnaayeen, waxaana shilkaasi ku geeriyooday labo ka mid ah ciidanka dawladda waxaana ku dhaawacmay 9 kale oo qaar ka mid ah xaaladooda caafimaad ay aad u liidato.